MediaTek Helio P70: Processeur MediaTek vaovao | Androidsis
MediaTek Helio P70: Ilay mpikirakira vaovao miaraka amin'ny fahaizana artifisialy
MediaTek dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny processeur vaovao ao amin'ny fianakavian'i Helio. Ity ny Helio P70, izay mahatratra ny elanelana sy fidirana fidirana, ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny telefaona amin'ity sehatry ny tsena ity. Mpikirakira iray izay mampanantena fahombiazana tsaratsara kokoa, ankoatry ny fananana fisian-tsolika artifisialy ao aminy, hanatsara ny asany.
Ity Helio P70 ity dia santionany iray hafa amin'ny fanatsarana noho ny mpikirakira ny mpanamboatra Manana sinoa. Ankoatr'izay, ny fampidirana ny faharanitan-tsaina artifisialy ao amin'izy ireo dia mandray anjara amin'ny asany marina. Inona no azontsika antenaina amin'ity processeur MediaTek vaovao ity?
Ny marika sinoa dia miloka paikady vaovao, izay mitady ny tsy hifaninana amin'ny Qualcomm, fa kosa hanome ny kalitao tsara indrindra amin'ireo mpikirakira azy, sady mitazona ny vidiny mirary. Mety ho an'ny marika mitady hitazona ny vidiny ambany amin'ny findainy. SYny Helio P70 vaovao dia nantsoina hanome fampisehoana tsara. Ny tena mampiavaka azy dia:
Vita amin'ny 12 nm
Masinina NeuroPilot Artificielle intelligence
CPU fototra valo: 4 Cortex A73 amin'ny 2.1 GHz. Ary 4 Cortex A57 amin'ny 2 GHz.
Tohano hatramin'ny 8 GB RAM
Mali-G72 MP3 GPU dia nahatratra hatramin'ny 900 MHz.
Hatramin'ny fakan-tsary 24 sy 16 MP roa na sensor iray 32 MP tokana
Faharanitan-tsaina sy fanamafisana ny elektronika ho an'ny fakantsary
Lahatsary horonantsary 2K amin'ny 30 fps amin'ny H.264 sy H.265.
Ireo finday voalohany mampiasa Helio P70 dia antenaina hanomboka amin'ny taona ho avy. Nanomboka tamin'ny Novambra, marika toy ny OPPO sy Nokia no hanomboka hampiasa azy io, fa amin'izao fotoana izao dia tsy mbola misy maodely voamarina amin'ity fianjerana ity. Na dia efa miasa miaraka aminy aza ny marika.
Ka manantena izahay fa handre tsy ho ela izay maodely voalohany tonga miaraka amin'i Helio P70 eny an-tsena. Tsy misy isalasalana, processeur izay mampiseho indray ny fandrosoan'ny MediaTek eny an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MediaTek Helio P70: Ilay mpikirakira vaovao miaraka amin'ny fahaizana artifisialy
Fahatsiarovana ireo fahatsiarovana Samsung vaovao ho an'ny finday miaraka amin'ny fitehirizana UFS 3.0